Ireland Waxay Noqon Kartay 'Cayaaryahan Weyn' Wax Soo Saarka Xashiishadda • Dawooyinka Inc.eu
Ireland waxay noqon kartaa 'ciyaaryahan weyn' wax soo saarka xashiishadda
Emails-ka ayaa cadeynaya in beeraleyda Irish ay la xiriireen Waaxda Caafimaadka si ay ugala hadlaan talaabooyinka xiga, iyagoo awood u leh inay isla markiiba ka dhigaan Ireland xarunta xigta ee xashiishadda Yurub.
1 Sharciga xashiishadda ee Ireland
2 Ireland ku jirta (daawo) xashiishad
Ireland waxay haysataa fursad dahabi ah oo ay ku noqon karto "doorka ugu weyn" soo saarista xashiishadda caafimaadka ee heerka warshadaha, bulshada beeralayda ah ayaa u sheegay dawladda.
Sarkaal ka tirsan Ururka Beeraleyda Irish ayaa u sheegay Waaxda Caafimaadka in Ireland ay raaci karto Mareykanka iyo Kanada soo saarista "hemp warshadaha, CBDsaliida iyo xashiishka dawada leh ”hadii sharciyada la badalayo.
Ka dib markii lagu guuleystay Codsi Xorriyadda Macluumaadka (FOI), The Times ayaa soo saaray faahfaahinta isweydaarsiga u dhexeeya mas'uuliyiinta matalaya beeraleyda iyo dowladda.
Fintan Conway, xoghayaha fulinta ee Ururka Beeraleyda Irishka, wuxuu fariin ugu diray Marie Egan, oo ah daroogo, daroogada la xakameeyo iyo farmashiistaha waaxda caafimaadka, in Ireland ay noqon karto safka xiga ee soo saarista xashiishada caafimaad.
Wuxuu yiri: "Ireland juqraafi ahaan iyo siyaasad ahaanba meel fiican ayey u taagan tahay inay noqoto doorka ugu weyn ee suuqa caalamiga ah ee soo koraya ee hemp warshadaha, saliida CBD iyo xashiishadda caafimaadka"
"Laakiin si dalagga iyo warshaduhu ay u xaqiijiyaan wax-soo-saarkooda iyo awooddooda dhaqaale, qaab-dhismeedka saxda ah ee nidaaminta waa in la dejiyaa."
Sharciga xashiishadda ee Ireland
Ireland gudaheeda, isticmaalka xashiishadda madadaalada ayaa si adag loo mamnuucay, sida ugu badan ee dalalka adduunka.
Xashiishadda caafimaadka waxay liis garaysaa xashiishad, xashiishka xashiishka, cannabinol iyo waxyaabaha ka dhasha ee loo yaqaan 'Schedule 1977 drugs' sida ku xusan Xeerka Isticmaalka Maandooriyaha ee 1.
Ireland ku jirta (daawo) xashiishad
Si kastaba ha noqotee, dadka la xanuunsanaya xanuunka daba dheeraada waxaa loo oggolaan karaa inay isticmaalaan xashiishadda dawada ah haddii codsigooda uu oggolaado Wasiirka Caafimaadka.
Mr Conway wuxuu sheegay in Ireland ay ka iibsan karto abuurka xashiishadda meel ka baxsan Midowga Yurub, taas oo uu sheegay inay fursad dahabi ah u noqon doonto shirkadaha warshadaha xashiishadda ee dalka oo dhan.
Waxa kale oo uu sheegtey in Ireland ay ku biiri karto Mareykanka iyo Kanada oo ay ka soo saari karaan wax soo saar tayo sare leh meel hoose.
Wuxuu yiri: “Abuurkan xilligan ma heli karaan beeraleyda Midowga Yurub. Raacitaanka jidkaas oo kale waxay siinaysaa soo saarayaasha Irish faa'iido tartan weyn leh ”.
“Iyadoo lagu saleynayo waxyaabaha ay hadda ka kooban tahay CBD ee ubaxyada hemp ee 3-5 boqolkiiba CBD, beeraley wuxuu filan karaa ilaa € 5.000 halkii tan oo ubax ah.
- Haddii Ireland ay oggolaan lahayd noocyo ka kooban waxyaalo aad u sarreeya oo ka kooban CBD - iyadoo la tixgelinayo THCxadka 0,3 boqolkiiba - ilaa 15 boqolkiiba, tani waxay keeni kartaa laab laab saddex laab ah. ”
Sida laga soo xigtay Mr Conway, la'aanta xadka THC ee sharciga ah ee hooseeya ee Ireland waa caqabad weyn, waxayna ka hortageysaa in dalku horumar sameeyo.
Wuxuu ku khilaafsanaa xeerarka Irish, oo u kala saaray wax soo saarka CBD inay yihiin walxo la kontoroolo xitaa qaddar yar oo THC ah.
Ms. Egan oo ka tirsan waaxda caafimaadka ayaa ka leexatay rasaasta, iyada oo leh, "Ilaa iyo maanta, siyaasadu ma ogola in beerista xashiishadda loo isticmaalo arrimo caafimaad oo ka baxsan cilmi baarista, mana jirin wax ruqsad ah oo hawshan la siiyay.
Waxay intaas ku dartay in Mr. Conway uu la hadlo Hay'adda Nidaaminta Wax soo saarka Caafimaadka (HPRA) haddii uu xiiseynayo barnaamijka xashiishadda caafimaadka, oo uu tijaabiyey xoghayihii caafimaadka ee xilligaas.
Ilo ay ka mid yihiin Canex (EN), NewsTalk (EN), Waqtiyada (EN), TopShelf (EN)
beerista cannabisEuropaIrelandsharciyeyntasharci-dejintadaawo cannabisdaawada cawskaTHCsharciga
Machadka Caalamiga ah ee Cannabis Institute (GCI) Summit Europe wuxuu madaxda adduunka siinayaa fursad ay kaga qayb galaan 11 iyo 12 ...
Hurdo la’aanta waa mushkilad weyn. Xalka CBD ma yahay?
Waxaa jira dad badan oo seexda saacado aad u yar maalintii. Ka dibna waan haysannaa ...
Daraasad: Carruurta si dadban u soo gaadhay qiiqa xashiishadda waxay u badan tahay inay qaadaan hargab
Dhakhtarku wuxuu uga digayaa duuliyeyaasha wax ku saabsan alaabada CBD ee EAA AirVenture
Tilray wuxuu soo tebiyay $ 53,7 milyan oo iibinta xashiishadda rubuca afaraad
Sidee Loogu Iibin Karaa Daroogooyinka Online -ka xilli cusub ayay yeelan doontaa xagaaga 2022?